Boriborintany fahatelo Raikitra ny fanadiovan-tanàna
Nanadio ny faritra manodidina an’i Behoririka sy Magro ny avy ao amin’ny Boriborintany fahatelo Kaominina Antananarivo Renivohitra omaly alakamisy 29 novambra, hetsika izay tafiditra ao anatin’ny
vinan’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana dia ny mba hanana tanàna madio. Efa nanomboka ny alin’ny alarobia ny asa fanadiovana, izay notanterahin’ny kaominina sy ny SAMVA. Nisy ny famafana ny lalana, ny fandraofana ny fako, ny fisokirana tatatra tsentsina, ny fisorohana ny ahitra ary fanadiovana ny manodidina ny “bac à ordures”, izay avy nanesorana ny fako. Ny hanamaivanana ny fiparitahan’ny fako no tanjon’ny kaominina, eny fa na dia any anatin’ny lalankely sy eny amoron-dalana aza. Manentana hatrany ny mponin’Antananarivo ny delegen’ny boriborintany fahatelo Atoa Hery Razafintsalama mba hanaja hatrany ny ora fanariana fako, izay manomboka amin’ny 5 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora. Mbola hitohy anio zoma eny amin’ny fokontany Ambohitrakely moa izao asa fanadiovana izao.